Etu esi kee ụwa | Network Meteorology
Portillo nke German | | Astron, Geology
O doro anya na ị chetụla otu esi kee uwa. Ọ bụrụ na ị bụ onye Katọlik, ha ga-agwa gị na Chineke kere ụwa na ihe niile dị ndụ bi n’ime ya. Sayensị, n'aka nke ọzọ, enyochaala ọtụtụ afọ banyere mbido ụwa na otu o si malite na ọtụtụ nde afọ ndị a. N'okwu a, ị ga-elebara anya geological oge, ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ nke evolushọn nke ụwa na-agbanahụ n'ọtụtụ mmadụ.
N’isiokwu a, anyị ga-akọwa n’ụzọ miri emi otu esi kee andwa na otu o si malite taa.
1 Nhazi ụwa
2 Nke a bụ otu esi kee ụwa
3 Nhazi nke ikuku nke uwa
4 Etesa ahụ meteor
Mmalite nke ụwa anyị sitere otu nebula ụdị protosolar. Ọ malitere ijeri afọ 4600 gara aga. N'oge okike, mbara ala niile nọ n'ọnọdụ ntụ dị ala. Nke ahụ bụ, a kpụrụ ha ka na-enweghị ikuku ma ọ bụ ndụ (n'ihe banyere ụwa). Naanị ihe mere ka okike nke ndụ n’elu ụwa ga - ekwe omume bụ ụzọ zuru oke site na Anyanwụ.
Nke ịdị adị nke igwe ojii ikuku nke mere ka nkukota na ihe ntụ ahụ mebiri usoro mbara igwe na-agaghari gburugburu oke ihe gbawara. Ngwurugwu ndị a na-agbakọta n'ihe anyị maara taa dịka mpaghara Milky Way a na-akpọ Eagle Nebula ma ọ bụ ogidi nke okike. Igwe ojii atọ nke ikuku na ikuku bụ ihe na-enyere aka ịmepụta kpakpando ọhụrụ mgbe ha dara n'ihi ike ndọda.
A kpọnyere uka nke uzuzu ahụ ma mee Anyanwụ. N'otu mgbe ahụ e guzobere ụwa ndị ọzọ ndị mejupụtara mbara igwe, otú ahụ ka mbara ụwa anyị a hụrụ n'anya mekwara.
Nke a bụ otu esi kee ụwa
Nnukwu gas dị ka mbara ala dị Jupita y Saturn anyị nọ na mmalite. Ka oge na-aga, ọ ghọrọ ọnọdụ siri ike site na ime ka eriri ahụ sie ike. Ihe okike e kere eke nke ụwa na-akpata iche n'ime ime ụwaa, ebe ọ bụ na ntọala ahụ esighị ike. Ihe ndi ozo ndi ozo na-ewere ike ugbu a nke anyi maara dika Efere Tectonic.
Isi nke iswa nwere mmiri iron na nickel mebiri emebi na magma. Ugwu nke ọkụ a kpụrụ n'oge ahụ na-arụ ọrụ ma ha na-ebupụta lava tinyere nnukwu gas na -emepụta ikuku. Ihe mejupụtara ya agbanweela kemgbe ọtụtụ afọ ruo na nhazi ya ugbu a. Volcanoes abụrụla ihe dị mkpa na ntọala ụwa na akụkụ ya.
Nhazi nke ikuku nke uwa
Ikuku abụghị ihe emerela na mberede ma ọ bụ n’abalị. Enwere ọtụtụ anwuru site na ugwu mgbawa nke ebuputela kemgbe ọtụtụ puku afọ iji nwee ike mepụta ihe mejupụtara anyị nwere taa site na ya, anyị nwere ike ibi ndụ.
Ndabere nke ikuku mbụ bụ nke hydrogen na helium (gas abụọ kachasị baa ụba na mbara igwe). Na mpaghara nke abụọ nke mmepe ya, mgbe ọnụ ọgụgụ buru ibu nke meteorites kụrụ ụwa, a na-eme ka ọrụ mgbawa pụta ìhè.
A na-a resultingụ ikuku ndị na-esi n'ọkụ ndị a apụta dị ka ikuku nke abụọ. Gas ndị a bụkarịrị alụlụ mmiri na carbon dioxide. Volcanoes wepụtara ọtụtụ gas sulfur, n'ihi ya ikuku dị na-egbu egbu ma ọ nweghị onye ga-alanarị ya. Mgbe gas niile dị na mbara igwe dị na mmiri, e mepụtara mmiri ozuzo na nke mbụ ya. Nke ahụ bụ mgbe, site na mmiri, nje bacteria nke mbụ na-emepụta foto malitere ịpụta. Nje bacteria ndị na-emepụta photosynthesis nwere ike itinye oxygen na ikuku na-egbu egbu nke ukwuu.
N'ihi ikuku oxygen dị n'oké osimiri na n'oké osimiri, ndụ mmiri nwere ike ịmalite. Mgbe ọtụtụ afọ nke mbido na mkpụrụ ndụ ihe nketa, ndụ mmiri malitere nke ukwuu nke na o ruru ná mba ọzọ iji nye ndụ ndụ ụwa. N’agba nke ikpeazụ nke ikuku, ihe mejupụtara ya adịla ka ọ dị taa 78% nitrogen na 21% oxygen.
Etesa ahụ meteor
Metwa n'oge ahụ metụrụ ọtụtụ meteorites nke mere ka e nwee mmiri mmiri na ikuku. Site na nke a malitekwara echiche ahụ ndị sayensị na-akpọ ya Chaos Theory. Ma ọ bụ site na mbibi, usoro nwere nnukwu entropy nwere ike iwepụta ndụ ma gaa na nha anya nke anyị nwere ugbu a.
Na mmiri izizi nke mere, akụkụ miri emi nke ogbugbo ahụ ka etolitere site na fragility nke ọ nwere n'oge ahụ n'okpuru ịdị arọ nke mmiri. Nke a bụ ka e si kee hydrosphere.
Nchikota ihe nile mejuputara uwa mere ka o kwe omume inwe ndu dika anyi mara ya. Otutu mmepe anyi bu n'ihi ikuku. Ọ bụ ya na-echebe anyị pụọ na ụzarị ultraviolet na-emerụ ahụ nke anyanwụ, ọdịda nke meteorites na oké ifufe nke ga-ebibi akara na usoro nkwukọrịta niile nke ụwa.
A ka na-arụrịta ụka gbasara mbara ala ndị gbara kpakpando gburugburu na otú e si hazie ha gburugburu ụwa. Agbanyeghị, usoro etinyere n'ịwa mbara ụwa edochabeghị anya. Nsogbu bụ na, dị ka m kwuru na mmalite nke isiokwu a, ebe a na-achịkwa oge na-abụghị nke mmadụ. Ya mere, nhazi mbara ala abụghị ihe anyị nwere ike ịmụ ma ọ bụ lelee usoro ya. Anyị kwesịrị ịdabere na ihe akaebe sayensị na echiche.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu otu esi kee Earthwa. Nkwenkwe nke onye ọ bụla gbasara ọzụzụ ha bụ n'efu, ebe a ka anyị na-enye nsụgharị sayensị ebe ọ bụ blọọgụ sayensị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Etu esi kee ụwa